‘मैले न्यायाधीश भेटेको छैन’-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली | रक्त न्युज
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भन्ने समाचार गलत भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफूले कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको तर अदालतप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउन त्यस्तो प्रचारबाजी गरेको बताएका छन्। शनिबार ओली पक्षीय नेकपाको प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीश भेटेको भन्दै झुटो प्रचार गरिएको बताए।
‘फलानो–फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकहाँ भेट्न गए। यति बजेदेखि यतिबजेसम्म भेटे भनेर प्रचार गरियो। योभन्दा ठूलो झुट, योभन्दा बढी बेइमानी के हुन सक्छ ? न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास घटाउनका लागि न्यायप्रणालीमाथि यो गम्भीर प्रहार हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशहरूलाई आफूले भेटेको प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। ‘ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिल्यै भेटेको छैन, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि वकिल भएको बेला सपना प्रधान माननीयलाई भेटेको थिएँ, त्यो पनि यस्तै कार्यक्रममा। अरू न्यायाधीशहरूलाई देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा निवेदकमध्ये शशी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका चारजना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको प्रसंग निकालेपछि प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई भेट गरेकै हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा संविधानको धारा खुलाउनुपर्छ भनेर कुन संविधानको कुन धारामा लेखेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
उनले पार्टीका नेताहरूलाई सूर्य चिह्न चाहिने भए पार्टीमा फर्कनुपर्ने बताएका थिए। पुष्पकमल दाहालको नाम नलिई जसले अहिलेसम्म सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छैन उसलाई नै सूर्य चिह्न चाहिएको रहेछ भनेर व्यंग्य पनि गरेका थिए। ‘जसले एक पटक सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेको छैन, उसलाई किन चाहियो सूर्य चिन्ह ? निर्वाचन नै चाहिँदैन भन्नेहरूलाई चुनाव चिह्न चाहिएछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।उनले नेपाल–दाहाल समूहप्रति लक्षित गर्दै आफूले जनता हँसाउँदै हिँड्दा चिन्ता गर्न थालेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘उहाँहरूलाई केपी ओलीले मान्छे हँसाउँदै हिँड्दा चिन्ता छ। के म मान्छे मार्दै, दुनियाँलाई रुवाउँदै हिडौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले मजदुरमा मुस्कान ल्याउन चाहेको, नानीहरूका आँखाबाट आँसु पुछ्न चाहेको पनि बताए।
‘उनीहरूले दुनियाँ रुवाएर, कसैको घोडा खोसेर रुवाए, कसैलाई गाडी खोसेर रुवाए, कसैको खेत खोस्या छ, कसैको घर र पैसा खोस्या छ, रुवाउने अनेक काइदा छन्, मारेर, कुटेर, लुटेर पनि रुवाएको छ, मैले हँसाएँ भनेर कुरा गरिराखेका छन्, नेपाली जनता हाँस्दा किन पिर परेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। कार्यक्रममा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए।
अघिल्लो लेखमानिर्मल पूर्जासहित १० नेपालीद्वारा के टू हिमालको सफल आरोहण, विश्व रेकर्ड कायम
अर्को लेखमापरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणमा कार्यसूचीमै परेन सीमा विवाद र ईपीजी